Ecodesign: chii, maitiro uye zvakanakira | Green Renewables
ChiGerman Portillo | 28/04/2022 12:00 | Environment
Mumakore achangopfuura, kuwedzera kwemasangano uye ruzivo rwemagariro ezvakatipoteredza zvakakonzera kubuda kwe ecodesign. Kudzokororwa kwemarara kwave kushambadzwa zvakanyanya munhepfenyuro, semuenzaniso nekusimudzira kutengwa nekutengesa zvinhu zvakamboshandiswa. Nekudaro, iyi idanho repamusoro rakanangana nekudzikisa zviwanikwa zvatinoshandisa uye tsvina yatinogadzira. Kune izvi, zvinodikanwa kupindira mune manejimendi masisitimu kuitira kuunza ecodesign kune yese yakavakirwa nharaunda.
Nechikonzero ichi, isu tichakumikidza chinyorwa ichi kukuudza zvese zvaunoda kuziva nezve ecodesign, maitiro ayo uye kukosha kwayo.
1 Chii chinonzi ecodesign
2 Hunhu hwe ecodesign
4 Kugadzirwa kwakasimba uye magadzirirwo
5 zvakatipoteredza zvakanakira
Chii chinonzi ecodesign
Ecodesign chikamu chemaitiro ekuvandudza chigadzirwa chine chinangwa chekudzikisa kukanganiswa kwezvakatipoteredza kwechigadzirwa. Zvinogona kutaurwa izvozvo kuwana kusimba kwehupfumi ndiyo kiyi kune manejimendi system, nokuti nekugadzira nekugadzirisa zvakare zvigadzirwa zvinoremekedza zvakatipoteredza, zvinokwanisika kumisa kuparara kwezvisikwa, kupera kwezviwanikwa uye zvibvumirano zvinokanganisa zvinokanganisa ecosystem uye hutano hwevanhu. Nheyo dze ecodesign ndeidzi:
Kubudirira mukugadzirwa kwechigadzirwa, ndiko kuti, kushandisa hushoma huwandu hwezvinhu uye simba zvinogoneka.
Yakagadzirwa kuti iparadzwe, ichibvumira kudzokororwa kweramangwana rechigadzirwa, chimwe nechimwe chezvikamu zvacho chinogona kuzivikanwa zviri nyore uye kupatsanurwa kuti chiraswe zvinoenderana nehunhu hwacho uye kuumbwa kwayo.
Gadzira zvigadzirwa uchishandisa imwe kana anopfuura "bio" zvinhu kurerutsa maitiro ekudzokorodza.
Shandisa maumbirwo akasimba uye zvinhu.
Kusiyana-siyana uye mukana wekushandisa zvakare uye kudzokorodza chigadzirwa.
Deredza saizi yezvigadzirwa kuti uderedze greenhouse gasi kubuda (GHG) panguva yekufambisa. Nekuda kweizvozvo, zvimwe zvigadzirwa zvinogona kutakurwa parwendo, optimize nzvimbo uye fossil kushandiswa kwemafuta.
Kubata zvigadzirwa semasevhisi uye kwete sezvinhuwo zvawo, kudzikamisa mashandisiro azvo kune zvinodiwa uye kwete kune zvishuwo zvekuva nazvo, pari zvino chiratidzo chemusika.
Tsigira matekinoroji matsva ekuvandudza kugona kwechigadzirwa.
Kuparadzira uye kubatanidza meseji yekuenderera kwechigadzirwa mukugadzirwa kwayo.
Hunhu hwe ecodesign
Mukupedzisa, chinangwa che ecodesign ndechekudzikisa kukanganiswa kwezvakatipoteredza kwezvigadzirwa zvatinoshandisa muhupenyu hwavo hwose uye inovimbisa kugara zvakanaka uye hupenyu hwevashandisi. Mamwe emhando huru ye ecodesign ndeiyi:
Inokodzera kushandiswa kwehupfumi hwedenderedzwa.
Iwe unogona kuderedza mari yekugadzirisa uye kutumira chigadzirwa.
Inovandudza nzira yekugadzira uye naizvozvo kunaka kwechigadzirwa chakawanikwa.
Inobatsira kune hutsva hunhu hwekambani.
Inopa nhanho ina dzinobvumira kuita pakuvandudza, kugadzirisa, kugadzira uye kutsanangurwa kwezvigadzirwa zvitsva uye masisitimu matsva ekugadzira.
Dzivisa kupambadza zviwanikwa.
Kana hupenyu hunobatsira hwechigadzirwa hwapera, funga kuti chigadzirwa chacho chinoshandiswa zvakare uye chinoshandiswa zvakare, ichipa kukosha kune tsvina.
Kune akasiyana ecodesign mazano akadai se: LiDS vhiri uye PILOT zano.
Mumienzaniso ye ecodesign inoratidzwa pazasi, zvimwe chikamu chehupenyu hwedu hwezuva nezuva, nepo vamwe vachiratidza kusimukira kuchiri muhucheche:
Ecodesign yemafiriji, mafiriza uye zvimwe midziyo zvakadai semaheater, muchina wekuwachisa uye madhishi, ayo anodzorwa neEuropean Commission (EC).
Kugadzira uye kuvaka kwezvivakwa zveecological.
Michina yekofi yekuItaly nekuti haishandise mafirita emapepa.
Iyo fenicha inogadzirwa nezvinhu zvine FSC chisimbiso (Forest Stewardship Council) uye zvinhu zvakadzokororwa.
Fenicha inotengeswa isina kuunganidzwa, ichideredza saizi yechigadzirwa uye optimize kutumira.
Inobviswa dhizaini fenicha yakadai semabhenji emudhorobha.
Shandisa marara emachira, mapurasitiki kugadzira mbatya.
Kugadzirwa kwakasimba uye magadzirirwo
Munyika inofamba ichienda kune 8 bhiriyoni vanhu, iyo yekare modhi yeiyo mutsara hupfumi ndeyechinyakare uye inotitungamira mune ramangwana risina chokwadi. Ecodesign inoberekerwa mukati meiyi gadziriro, zvigadzirwa zvinogara zvichisanganisira maitiro ezvakatipoteredza mumatanho avo ese: kubata pamuviri, kusimudzira, kutakura uye kudzokorodza.
Tinofanira kubudisa zviri nani uye zvakanyatsonaka, nokuda kwezvikonzero zviri pachena: zvinhu zvakasvibirira uye zviwanikwa hazvisi zvisingagumi, uye kana tikasazvitarisira, zvinogona kupera. Mamwe, semvura, akakosha kune hupenyu, nepo zvikamu zvakakosha zvehupfumi zvichitsamira pane zvicherwa, senge tekinoroji indasitiri. Kana tikawedzera carbon dioxide emissions uye kushandiswa kwesimba munzvimbo dzekugadzira, pasi haizobhadhara mabhiri.
Mhedzisiro yekutenga -maererano neGreenpeace, isu tinoshandisa 50% zvimwe zviwanikwa nhasi kupfuura makore makumi matatu apfuura - akatungamira United Nations (UN) kutora nzira nyowani yekugadzira yekukwirisa zviwanikwa uye simba, kuvandudza simba rinogona kudzokororwa, kuchengetedza zvivakwa, kuvandudza kuwanikwa kwemabasa ekutanga uye kugadzira ecological uye emhando mabasa.
Mabhenefiti ezvakatipoteredza ekugadzirwa kwakasimba zvakare anobatsira maindasitiri uye vagari. UN inotaura kuti hurongwa hwakanaka kumunhu wese nokuti hunovandudza mararamiro emamiriyoni, kuderedza urombo, kuwedzera kukwikwidzana uye kuderedza mari yehupfumi, yezvakatipoteredza uye yemagariro evanhu.
Zvakanakira ecodesign maererano nechigadzirwa uye masevhisi pfungwa akawanda uye anobatsira kuderedza akasiyana siyana ezvakatipoteredza zvechinyakare zvigadzirwasekutarisira marara.
Nehurombo, kune zvakare zvimwe zvipingamupinyi zvinodzivirira nzira iyi kuti isagamuchirwe sechiyero muchizvarwa chezvigadzirwa nemasevhisi, senge ruzivo rudiki rune mutengi nezve zvigadzirwa izvi, mutengo wechigadzirwa wakakwira kupfuura wezvigadzirwa zvechinyakare. pazviitiko zvakawanda , kutsvaga zvinhu zvekugadzira dzimwe nzira uye kusuma zvigadzirwa izvi mumakwikwi emusika zvikamu, zvakadai sedzimba dzepurasitiki.
Saka, semhedziso, isu tinogona kuona kuti kunyangwe zvakanakira zvakanakira ecodesign zvese kune vagadziri uye zve vatengi, kukanganisa kwayo kuchiri kukanganisa mukurumbira wayo mumusika wanhasi uye, nokudaro, inotadzisa kushandiswa kwayo mukutorwa kwedu mumaitiro ekushandisa. Zvisinei, zvakakosha kuti tirambe tichizviona seimwe nzira inokosha yekugadzirisa matambudziko makuru ezvakatipoteredza anotitambudza, akabatanidzwa nemitemo yepamutemo, kushandiswa kwepamusoro uye kugamuchirwa kwekuziva kwakakwana kwezvakatipoteredza munharaunda.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve ecodesign uye maitiro ayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » Ecodesign